कम्युनिष्ट Archives - Lokpati.com
Tag - कम्युनिष्ट
वामपन्थी विचारक आन्तोनियो ग्राम्शी को हुन् ?
काठमाडौं। आन्तोनियो ग्राम्शी इटाली कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक, मार्क्सवादी दर्शन र विचारका प्रखर समर्थक र प्रचारक थिए। बीसौं शताब्दीको शुरुका चार दशकहरूमा विश्व राजनीतिमा फासीवादी राजनीतिप्रतिको रुझान् बढ्दै गएको थियो...
भ्यादिमिर लेनिनमाथि फान्थाडोरा क्यापलिनले गोली हानिन्। विश्व शान्तिकै प्रवक्ता मानिने महात्मा गान्धी नाथुराम गोड्सेको गोलीबाट मारिए। विश्वमा यस्ता धेरै नेता छन्, जो क्रान्तिको एक कालमा निकै चर्चित र लोकप्रिय हुन्छन्।...
यी हुन् विश्वका प्रमूख संशोधनवादी नेता
विचारधारा वैज्ञानिकता निरुपणको प्रश्न निकै जटिल र कष्टसाध्य प्रश्न हो। मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई वस्तुगत धरातलमा उभ्याएर व्यवहारिक प्रयोग गर्ने प्रश्न सैद्धान्तिक व्याख्याभन्दा कैयौं गुणा जटिल विषय पनि हो। मार्क्सवाद...
नयाँ संस्कृतिको जन्म एकाएक र रातारात नभएर त्यसको विकास–प्रक्रिया पहिलेदेखि नै भैरहेको हुन्छ र पछि पनि लामो अवधिसम्म चलि नै रहन्छ। त्यसै गरी पुरानो संस्कृति पनि रातारात नष्ट हुँदैन, त्यसको आधार पहिलेदेखि कमजोर बन्दै गएको...
काठमाडौं/मनहरि तिमिल्सिना। नेपालमा वामपन्थी शक्तिको सत्ता र सडकमा बलियो जनमत छ। गत निर्वाचनमा जनताले वामपन्थी शक्तिलाई दुईतिहाई जनमत दिएका छन्। तर, वामपन्थी सरकार, पार्टी र नेता–कार्यकर्ताका दैनिक गतिविधि हेर्दा उनीहरु...
नेता–कार्यकर्ता किन पढ्दैनन् पुस्तक ?
आखिर नेता–कार्यकर्ता किन पढ्दैनन् त ? त्यसका विविध पाटा छन्। ठ्याक्कै यही कारणले मात्र ‘पढन् संस्कृति’ हराएको हो भन्न सकिने स्थिति छैन। तर, केही कारण अवश्य छन्, जुन कारण कम्युनिष्टहरुलाई वैचारिक रुपमा भुत्ते मात्र बनाएको छैन...
रुसमा सत्ता कब्जा गरेपछि लेनिनको पहिलो सम्बोधन (पूर्णपाठ)
मजदुर साथीहरु, सैनिकहरु, किसानहरु, तमाम श्रमिकहरु !
पेत्रोग्रादमा मजदुर एवं किसानहरुको क्रान्ति अन्तिम रुपले विजयी भएको छ। केरेन्स्कीद्वारा ठगिएका कजाकहरुको नगण्य संख्यामध्ये बचेखुचेको अन्तिमांश समेत तितरबितर पारिएका छन्...
मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद के हो ?
मार्क्सवादी दर्शनमा मार्क्स, एंगेल्स हुँदै लेनिन, माओले धेरै नै विकास गर्नुभएको छ, जसबारे हामीलाई मार्क्सवादी दर्शनको विकासमा लेनिनवादी आयामबाट र मार्क्सवादी दर्शनको विकासमा माओवादी आयामबाट स्पष्ट हुन्छ। मार्क्सवाद बिना...
‘राम्रो गर्‍याैं भने पचासौं वर्ष जित्न सक्छौं’ : प्रचण्ड
काठमाडौं, १० फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताको भावना बुझेर काम गर्नसके नेपालका कम्युनिष्टले पचासौं वर्षसम्म जित्नसक्ने बताएका छन्।